Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ gị kwesịrị iji kwụọ ụgwọ maka njikwa ejikwa DNS? | Martech Zone
Mgbe ị na-ejikwa ndebanye aha nke ngalaba na ngalaba na-edeba aha ngalaba, ọ bụghị mgbe niile nnukwu echiche iji jikwaa ebe na otu ngalaba gị si edozi ndenye ndenye DNS ndị ọzọ iji dozie email gị, subdomains, host, wdg. bu n'ire Ngalaba, na-achoghi na ngalaba gi nwere ike idozi ngwa ngwa, jikwaa ya ngwa ngwa, ma nwekwaa mgbidi.
Gịnị bụ DNS Management?
Njikwa DNS bụ nyiwe na-achịkwa ụyọkọ ihe nkesa usoro Aha ngalaba. A na-etinye data DNS n'ọtụtụ sava anụ ahụ.
Kedu ka DNS si arụ ọrụ?
Ka anyị nye ihe atụ nke nhazi saịtị m.
Onye ọrụ rịọrọ martech.zone na ihe nchọgharị ahụ. Arịrịọ ahụ na-aga na sava DNS nke na-enye ụzọ ebe ebe arịrịọ http dịịrị… na ihe nkesa aha. Mgbe ahụ aha ihe nkesa na-ajụ ajụjụ ma na saịtị m usu na-nyere iji ihe A ma ọ bụ CNAME ndekọ. Mgbe ahụ arịrịọ ka emere nye saịtị m ma nyekwala gị ụzọ nchọgharị ahụ.
Onye ọrụ ozi ịntanetị martech.zone na ihe nchọgharị ahụ. Arịrịọ ahụ na-aga sava DNS nke na-enye ụzọ ebe a na-echekwa ozi arịrịọ ahụ server na nkesa aha. Mgbe ahụ a na-ajụ ihe nkesa aha ma na-eweta nnabata email m site na iji ndekọ MX. Mgbe ahụ, ezigara email na ụlọ ọrụ nnabata email m ma zigara m na igbe mbata nke ọma.
E nwere akụkụ ole na ole dị egwu nke Nchịkwa DNS nwere ike ịme ma ọ bụ mebie nzukọ nke nyiwe ndị a na-enyere gị aka idozi:
Speed - Ngwa ngwa ngwa akụrụngwa DNS gị, enwere ike ịdọrọ arịrịọ ahụ ngwa ngwa ma dozie ya. Iji a adịchaghị DNS management ikpo okwu nwere ike inyere na onye ọrụ omume na search engine visibiliti.
Management - may nwere ike ịchọpụta na mgbe imelite DNS na ngalaba na-edeba aha, ị ga-enweta nzaghachi ọkọlọtọ na mgbanwe nwere ike iwe ọtụtụ awa. A DNS Management n'elu ikpo okwu mgbanwe ndị fọrọ nke nta na ezigbo oge. N'ihi ya, ịnwere ike belata ihe egwu ọ bụla na nzukọ gị site na ichere iji dozie ntọala DNS emelitere.
Ịgba ụgwọ - Gịnị ma ọ bụrụ na ngalaba na-edeba aha si DNS ada? Ọ bụ ezie na nke a abụghị ebe nkịtị, ọ mere na ụfọdụ mwakpo DNS zuru ụwa ọnụ. Imirikiti nyiwe njikwa DNS nwere ike ịrụ ọrụ failover DNS nke nwere ike ime ka ọrụ gị dị oke mkpa rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-aga.
ClouDNS: Fast, Free, Secnọgide na-eche DNS Bochum
ClouDNS bụ onye ndu na ụlọ ọrụ a, na-enye ọsọ ọsọ Bochum Bochum. Ha na-enye ọtụtụ ọrụ DNS nke na-amalite na akaụntụ nnabata DNS n'efu niile site na sava DNS nzuzo maka nzukọ gị:
DNS di omimi - Dynamic DNS bụ ọrụ DNS, nke na-enye nhọrọ iji gbanwee adreesị IP nke otu ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndekọ DNS na-akpaghị aka mgbe adreesị IP nke ngwaọrụ gị gbanwere nke ọma site na ndị na-eweta ịntanetị.
Secondary DNS - Secondary DNS na-enye ụzọ iji kesaa okporo ụzọ DNS maka ngalaba aha abụọ ma ọ bụ karịa ndị na-enye DNS maka ihe kachasị mma na oge na redundancy na ụzọ dị mfe na enyi. Nwere ike ijikwa ihe ndekọ DNS nke ngalaba aha naanị na otu (Primary DNS) onye na-eweta ya na onye na-eweta ọrụ nke abụọ na-eji teknụzụ Secondary DNS nwere ike ịdebe ma mekọrịta ya na akpaghị aka.
Gbanwee DNS - Ntughari DNS nyere site na ClouDNS bụ ọrụ adịchaghị DNS maka ndị nwe ụlọ ọrụ IP na ndị na-arụ ọrụ na ya anaghị etinye ya na atụmatụ Free. The Reverse DNS Bochum bụ azụmahịa klas ọrụ na-akwado ma IPv4 na IPv6 Reverse DNS mpaghara.
DNSSEC - DNSSEC bụ akụkụ nke ngalaba Aha System (DNS) nke na-enyocha nzaghachi na ngalaba aha nyocha. Ọ na-egbochi ndị mwakpo site na ịmegharị ma ọ bụ na-egbu nsị nke arịrịọ DNS. Emeghị teknụzụ DNS na nchekwa n'uche. Otu ihe atụ nke mbuso agha na akụrụngwa DNS bụ spoofing DNS. N'ọnọdụ dị otú ahụ, onye na-awakpo ihe hiwere ihe nchekwa nchekwa nke DNS, na-eme ka ndị ọrụ gara na weebụsaịtị wee nata adreesị IP na-ezighi ezi ma lelee saịtị ọjọọ nke ndị na-awakpo ya kama nke ha bu n'obi.
Failover DNS - Ọrụ Failover DNS n'efu site na ClouDNS nke na-edebe saịtị gị na ọrụ weebụ n'ịntanetị na usoro nke usoro ma ọ bụ ntanetị netwọk. Na DNS Failover ị nwekwara ike ịkwaga okporo ụzọ n'etiti njikọ netwọk na-enweghị isi.
Ghazi DNS - Jikwaa DNS bụ ọrụ jikwaa ndị ọrụ Bochum DNS nyere ọrụ. Ihe njikwa DNS na-enye ndị ọrụ ohere ijikwa okporo ụzọ DNS ha site na iji ogwe njikwa weebụ.
DNS ọ bụla - DNScast ọ bụla bụ echiche dị mfe - ị nwere ike iru otu ebe na-eso ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Kama ịnwe niile okporo ụzọ na-agbadata n'otu ụzọ, Anycast DNS jiri ọtụtụ ọnọdụ na-anata ajụjụ na netwọkụ, mana na mpaghara mpaghara dị iche iche. Ebumnuche ebe a bụ maka netwọkụ ịchọta ụzọ kachasị dị mkpirikpi maka onye ọrụ na otu sava DNS.
Enterprise DNS - ClouDNS 'Enterprise DNS network ezubere iji hazie ọtụtụ nde ajụjụ ọ bụla. Pricdị ọnụahịa ha agbadoghị na ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ. Agaghị akwụ gị ụgwọ maka ọnụ ọnụ gị na aha ngalaba gị agaghị akwụsị ịrụ ọrụ, n'ihi njedebe ajụjụ DNS. Agaghị akwụ gị ụgwọ maka ụdị idei mmiri gbara ajụjụ DNS.
SSL Asambodo - Asambodo SSL chebe data nke onye ahịa gị gụnyere okwuntughe, kaadị akwụmụgwọ, na ozi njirimara. Inweta asambodo SSL bụ ụzọ kachasị mfe iji mee ka ntụkwasị obi ndị ahịa gị nwere na azụmaahịa gị n'ịntanetị dịkwuo elu.
Onwe DNS sava - Onwe DNS sava bụ n'ụzọ zuru ezu na-acha ọcha-labeelu DNS sava. Mgbe ị nwetara sava DNS nkeonwe, ọ ga-ejikọta ya na netwọk ha na ntanetị weebụ. Ndi sistemụ sistemụ ga-ejikwa ma jikwaa Server ahụ wee nwee ike ijikwa ngalaba gị niile site na ntanetị ClouDNS.
ClouDNS bụ jikwaa DNS na-eweta ebe ọ bụ na 2010. Ozi ha bụ ịnye ọrụ DNS kacha mma na mbara ala. Ha na - emeziwanye ma na - agbasawanye netwọkụ ha gafere ụkpụrụ ụlọ ọrụ ma wetara ndị ahịa ROI kachasị elu. Ihe owuwu DNS ha nke Anycast gụnyere 29 dị iche iche data data dị na mba 19 na mpaghara 6.
Enweghị ọtụtụ oge na ị nwere ike ịchekwa ego ma bulie ngbanwe, ọsọ na ntụkwasị obi nke njirimara gị n'ịntanetị - mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị mere. Naanị mee ọchụchọ DNS outage ma hụ ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere nsogbu na DNS a pụrụ ịdabere na ha.
Banye maka Free ClouDNS Akaụntụ
Mara: Njikọ enyere na edemede a bụ njikọ njikọ anyị.
Tags: ihe ndekọigwe ojiindekọ ahadnsnjikwa aha ngalabangalaba aha ihe nkesa na-ngalaba aha ọsọ ọsọmkpebi ngalabaọsọ ọsọjikwaa dnsNdekọ mxsava ahaọsọ ọsọọsọ